Soo-saareyaasha Alaabada iyo Alaab-qeybiyeyaasha Alaab-qeybiyeyaasha
Madow Gawaarida Qaboojiyaha Muraayadda ah
YB Black Vertical Refrigerator Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taasoo ah shil kahortag, qarax-cadeyn la aan adkeysiga muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Black Vertical Qaboojiye Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Dhinac Laba Dhinac ah oo u Daahmaya Bandhiga Cake
YB Side Double Glazing for Cake Showcase waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-cadeyn la aan adkeysiga muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Muraayad Triple ah ayaa loogu talagalay iska caabinta UV. YB Side Double Glazing for Cake Showcase wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -22 ℃.
Aluminium Aluminium Daawaha Cabitaanka meeldhexaadka ah Glass Albaabka
YB Aluminium Alloy Frame Beverage Qaboojiyaha Glass Door wuxuu adeegsanayaa muraayadda la cusbooneysiiyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil ka hortagga, qarax-caddeyn la'aanta muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Aluminium Alloy Frame Beverage Qaboojiyaha Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara qulqulka hawada qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Jikada Golaha Wasiirada Glass Door
YB Kitchen Cabinet Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taasoo ah shil kahortag, qarax-caddeyn la aan adkeysiga muraayadaha gaariga. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Jikada Golaha Guriga Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Muraayad dahaaran oo leh Iftiinka Iftiinka
Muraayada YB oo dahaaran oo leh laydh iftiin leh (oo badanaa loo yaqaan IGU ama IG) waxay ka kooban tahay 2 ama in ka badan oo galaas ah, oo lagu kala saaray qashin wax lagu buuxiyo oo wax lagu buuxiyo oo si iskiis ah loo shaabadeeyey hareeraha geesaha si loo sameeyo hal unug. Muraayada YB oo dahaaran oo leh Iftiinka Iftiinka ayaa adeegsanaya muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Hawada si dabiici ah u shaabadaysan (Argon, Krypton waa ikhtiyaari) boosku wuxuu abuurayaa caqabad kuleylka iyo wareejinta codka taasoo ka dhigaysa IGUs aad wax ku ool u leh yareynta kororka kuleylka hawo-ama hawo. Marka lagu daro Low-E ama daahan milicsiga, waxqabadka insulin ee IGUs si weyn ayaa loo hagaajiyay.
Logo Coca Cola ayaa iftiimisay Muraayadda
YB Coca Cola Logo Illuminated Glass (oo inta badan loo yaqaan IGU ama IG) wuxuu ka kooban yahay 2 ama in ka badan oo gogo 'galaas ah, oo lagu kala saaray aaladda wax lagu buufiyo ee wax lagu buufiyo oo si qalad ah loo buuxiyay laguna wareejiyay geesaha si loo sameeyo hal unug. YB Coca Cola Logo Illuminated Glass waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn la aan adkeysiga muraayadda baabuurta. Hawada si dabiici ah u shaabadaysan (Argon, Krypton waa ikhtiyaari) boosku wuxuu abuurayaa caqabad kuleylka iyo wareejinta codka taasoo ka dhigaysa IGUs aad wax ku ool u leh yareynta kororka kuleylka hawo-ama hawo. Marka lagu daro Low-E ama daahan milicsiga, waxqabadka insulin ee IGUs si weyn ayaa loo hagaajiyay.
Meegaarka Qumman ee Tooska Qaboojiyaha Muraayadda
YB Silver Frame Xaqiiqda Qaboojiyaha Muraayadda Koorta wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarxin-caddeyn iyo adkeysashada muraayadda baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Silver Frame Xaqiiqda Qaboojiyaha Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Muraayadda Qurxinta Cadhadda leh
Muraayadda Qurxinta Caddaan ee YB waa muraayad nabadgelyo oo adag. Waxay soo martay daaweyn kuleyl gaar ah si loo kordhiyo xooggeeda iyo iska caabinta saameynta. Waxay uga adkeysi badan tahay jabitaanka galaaska caadiga ee sabeeya. Haddiise uu jabo, wuxuu badanaa ku kala jajabiyaa qaybo yar yar, oo aan u badnayn inuu keeno dhaawac halis ah. Muraayadda la shubay waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha, qalabka wax lagu soo bandhigo, qaboojiyaha, albaabbada iyo daaqadaha, iwm Dhumucdiisuna waxay ka 3mm ilaa 19mm, min size of 100 x 300mm, size ugu badan ee 3000 x 12000mm. Midab ama naqshad naqshadeyn kasta sidoo kale waa la habeyn karaa.
Daabacaadda Shaashadda Sawirka Xariirta
Muraayadda Daabacadda Daabacadda ee 'YB Silk Screen' waa muraayad nabadgelyo oo adag. Waxay soo martay daaweyn kuleyl gaar ah si loo kordhiyo xooggeeda iyo iska caabinta saameynta. Waxay uga adkeysi badan tahay jabitaanka galaaska caadiga ee sabeeya. Haddiise uu jabo, wuxuu badanaa ku kala jajabiyaa qaybo yar yar, oo aan u badnayn inuu keeno dhaawac halis ah. Muraayadda la shubay waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha, qalabka wax lagu soo bandhigo, qaboojiyaha, albaabbada iyo daaqadaha, iwm Dhumucdiisuna waxay ka 3mm ilaa 19mm, min size of 100 x 300mm, size ugu badan ee 3000 x 12000mm. Midab ama naqshad naqshadeyn kasta sidoo kale waa la habeyn karaa.
Muraayada 'YB Tempered Glass' waa muraayada badbaadada kuleylka ee adag. Waxay soo martay daaweyn kuleyl gaar ah si loo kordhiyo xooggeeda iyo iska caabinta saameynta. Waxay uga adkeysi badan tahay jabitaanka galaaska caadiga ee sabeeya. Haddiise uu jabo, wuxuu badanaa ku kala jajabiyaa qaybo yar yar, oo aan u badnayn inuu keeno dhaawac halis ah. Muraayadda la shubay waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha, qalabka bandhigga, qaboojiyeyaasha, albaabbada iyo daaqadaha, iwm. Muraayadayada tayada adag ee aadka loo adkeeyay oo ka sameysay fasalka muraayad an tayo leh oo tayo sare leh, waxay noqon kartaa mid siman ama qalloocan kolba sida loo doonayo. Dhumucdiisuna waxay ka 3mm ilaa 19mm, min size of 100 x 300mm, size ugu badan ee 3000 x 12000mm. Midab ama naqshad naqshadeyn kasta sidoo kale waa la habeyn karaa.
Albaabka Qaboojiyaha Tooska ah ee Gacanta Recessed
YB Upright Freezer Glass Door with Recessed Handle waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortaga, astaamaha qarxa oo adkeysanaya muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Xaqiiji Qaboojiyaha Muraayadda oo leh Recessed Handle wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.